Ah, ireto hatsara! Vita amin'ny metaly metatra ny vatany, saingy tsy mihetsiketsika mihoatra ny fatotra vita amin'ny vehivavy Eoropeana amin'ny lamaody any amin'ny bikini. Ny masony mainty tsy manam-paharoa dia mamiratra eo amin'ny aloky ny felatanana ny tanany manarona ny masoandro. Ny ranomandry fotsy misy ny iceberg dia namaly ny hafanana mafana avy amin'ny tsikiny malalaka. Ary ireto bozaka mahavariana misy zavamaniry ao anaty valizy misy tasy ireto?
Mpitarika ny filalaovan'ny vehivavy ao India amin'ny rà. Manontany tena aho hoe inona no itondrany ny vadiny ho fanomezana avy any amin'ny firenena lavitra?
Ho fahatsiarovana an'i India
Tsia, tsy azo atao mihitsy ny miala amin'ity firenena ity raha tsy maka metatra vitsy kely mirefotra sy mora mitebiteby miaraka aminao. Sari - izany no tokony hoentina avy any India amin'ny toerana voalohany.
Eo amoron'ny reniranon'i Ganges no misy ny tanànan'i Varanasi, izay mivarotra karazana ravina, voninkazo ary voankazo faran'izay tsara indrindra amin'ny sehatra sy brocade. Ny sarisary tsara indrindra dia amidy eny an-dalambe ao amin'ity tanàna ity. Raha tsy toy ny fanomezam-pahasoavana, dia noho ny tenanao ihany, ny malalanao, fa mila maka ny sari avy eto ianao. Kitapo feno, miaraka amin'ny choli mifanandrify (teboka miavaka eo ambanin'ny sari). Na izany aza, raha tsy i Varanasi, avy eo ny tanàna hafa, fivarotana sy tsena. Ny tena manan-danja dia ny mahita ny mombamomba anao manokana, ny lokanao ary ny fihetseham-ponao.
Fanomezana ho an'ny mpisoron'ny fivarotana
Ny sipany dia hankamamy fanomezana maoderina sy marevaka avy any Inde. Ny fanomezam-pahasoavan'ny pretra goavam-be mpividy dia tena zava-dehibe ny fisafidianana ao Delhi sy Kashmir. Ny Main Bazaar (boribory mainty) no renivohitr'i India noho ny fivarotana vehivavy tsara tarehy. Fa inona ihany no misy! Indrindra tsara tarehy matevina, mandry eo an-tsoroky ny elatra mangarahara amin'ny felam-boninkazo marevaka amin'ny vorona tsy fantatra. Hanome elatra toy izany ny namanao, ary ny lalàn'ny herimpo dia hamoy ny heriny mandritra ny andro vitsivitsy.
Kashmir no nofinofy kinetetik. Meksika ho an'ny mpitaitaikan'ny silk. Ny ivon'ny karazana silk any Inde sy manerana izao tontolo izao. Mipetraka koa ny scarf, anisan'izany ny karazana Tussa malaza.
Ny vehivavy tsirairay dia mahafantatra ny fahatsiarovana avy amin'ny India ho an'ny vadiny. Eny, ity fahatsiarovana madinidinika ity dia tsy maintsy mandaingotra ny sari-danjelin'ny sari tsy misy lanjany, mba hanamafisana ny fahamarinan'ny asa fanorenan'ny mpanao asa tanana.
Mazava ho azy fa momba ny firavaka. Ao amin'ny tsenan'ny tanàn-dehibe any Inde dia misy tsena volamena. Eto dia ny vehivavy dia voasariky ny maotera, ary ny olon-kafa dia tsy manana zavatra hafa hatao fa manaraka ny namany tsara tarehy. Na izany aza, ny lehilahy dia afaka mitady fitaovam-boninahitra vita amin'ny vato, enamelina ary volamena.
Ny lehilahy be fiahiana rehefa misafidy fanomezana ho an'ny vadiny dia tsy maintsy mahatsiaro fitsipika vitsivitsy:
Any India, tena mahafinaritra ny mpizaha tany. Tahaka ny mamitaka azy ireo amin'ny volamena. Noho izany, amin'ny haingon-trano - amin'ny fivarotana manokana. Any Delhi, tsara kokoa ny mandeha mivantana any amin'ny fivarotana fivarotana an'i Carol Bagh.
Ny vato sarobidy dia mety tsy ho sarobidy mihitsy. Azo atao ny misoroka ny risika ao Jaipur - ity no foibe indianina lehibe indrindra amin'ny fanodinana vatosoa sy vatosoa.
Aromatherapy amin'ny indianina
Hitsidika an'i India ianao ary tsy hitondra anao ny fofon'aina eny amoron-dranomasina dia heloka. Hatreto, tsy misy andraikitra ho azy na dia ao amin'ny code civile an'ny Federasiona Rosiana aza, fa iray amin'ireo antony maro tsy hialan'ny rafitra mpanao lalàna. Ny lalàna dia mamela heloka, fa ny namana dia tsy mahavela heloka raha tsy mitondra dite sy zava-manitra avy amin'ny dia.
Indian tea dia tsara tarehy. Tsia, tsy izany: ny tena tena indianina dia tsara tarehy. Afaka mikaroka fotoana lava any amin'ireo tanànan'i Rosia izy, fa eto, any amin'ny firenena iray misy dite - India izany, mila miezaka mafy ianao mba hisorohana ny fihaonana aminy. Mandritra izany fotoana izany, ny vidin'ity firavaka ity dia mihoatra noho ny demokratika.
Ny fifidianana ny fanomezam-pahasoavana sy ny fahatsiarovana avy any Inde dia afaka mitondra fahafinaretana, indrindra raha fofona. Karazana zavamanitra inona? eto dia tsy eto! Ririnina, karmetera, akanjo, kônandera, kardamôma, kanelina.
Ary ny fofon'ny fivarotana akanjo miaraka amin'ireo fofom-paty miparitaka amin'ny havoana mareva-doko! Mila mijery izany ianao, mila miaina ao anatin'io fofom-pofona feno. Ary manapaha hevitra hoe inona avy ireo zava-manitra azo avy any India ho fanomezana ho an'ny namana. Ny hany zavatra tsy tokony ataonao dia ny manamboatra karazan-tsakafo vita "vita amin'ny siny": rehefa feno karazan-tsakafo maromaro amin'ny fonosana iray miaraka amin'ny lintels. Ny hitondra ity fahagagana ity amin'ny tsy fivadihany sy ny fiarovana dia mety tsy hahomby, ary amin'ny fanokafana ilay fonosana dia ny tompona fahatsiarovana ilay fahatsiarovana dia mety hiteraka fahavoazana mety, na dia tsy ny drafitra aza.
What to See in Crimea - the best places in Crimea
Bali - isaky ny volana
Mandeha irery fotsiny - ho an'ny
Visa ho an'i Rosia ho an'i Vietnam
Volo amin'ny solaitrabe
Inona no tsaratsara kokoa - elektrika na solika?
Sakafom-boankazo - sakafo tsara indrindra amin'ny sakafo ao an-trano
Fanamaivanana ny tranon-kibo - soritr'aretina
Toerana amin'ny dacha amin'ny tanany
Ny fomba hikolokolo tsara ny nify - ireo torohevitra amin'ny dokotera mahasoa
Azo atao ve ny manao firaisana mandritra ny fadimbolana?
Toeran'ny sary mitifitra amin'ny zazakely